UNHCR တည်း ဟူသော ထရိုဂျင် မြင်းရုပ် | ngalone
← အနောက်တံခါးကို ကာကွယ်လိုသော ရခိုင်လူငယ်များကို ဒေသန္တရရဲ ဖွဲ့စည်းကာ လက်နက်တပ်ဆင်ပေးမည်
စစ်သင်တန်းတက်ရောက်မှုများ ရှိနေ →
ဦးကျော်ဇောဦး ၁။ ရခိုင်နယ်စပ်မှာ ဘင်္ဂါလီ ရှစ်သိန်းကျော်ကို ပိုးမွေးသလိုမွေးပြီး မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အချုပ်အချာ အာဏာကို ဆန့်ကျင်ဖျက်ဆီးရာရောက်တဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်တွေကို စဉ်ဆက်မပြတ် လုပ်ဆောင်နေခဲ့ တဲ့ အဖွဲ့အစည်းကတော့ UNHCR လို့ အတိုကောက် သိကြတဲ့ ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များ ဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံး ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ HCR လို့လည်း အဲသည်အဖွဲ့အစည်းကို ခေါ်ကြပါတယ်။
၂။ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် ပြီးခါစ ကာလမှာ UNHCR ဆိုတာမရှိခင်တုံးက၊ နိုင်ငံတကာဒုက္ခသည်အဖွဲ့ (International Refugee Organazation) အတိုကောက်အားဖြင့် IRO လို့ခေါ်တဲ့ အဖွဲ့ကို နိုင်ငံတွေ ပါဝင်ဖွဲ့စည်း လုပ်ဆောင် ခဲ့ကြတယ်။ အဲသည်တုံးက လုပ်ဆောင်ရာမှာ Displaced Person (DP) လို့ ခေါ်တဲ့ မူရင်းနေရာမှ တိမ်းရှောင်ထွက်ပြေးရသူတွေ နဲ့ Refugee လို့ခေါ်တဲ့ ဒုက္ခသည်တွေကို ခွဲခြားခြင်း နောက်ပြီးတော့ ခွဲခြားသည့်အလျောက် ပံ့ပိုးလုပ်ဆောင်မှုကွဲပြားခြင်းတို့ကြောင့် အငြင်းအခုန်တွေ အများကြီး လုပ်ခဲ့ရ တာတွေ ရှိခဲ့တယ်။ ဥပမာအားဖြင့် နာဇီဂျာမနီက ထွက်ပြေးလာတဲ့ ဂျူးတွေကို အာရပ်နိုင်ငံတွေက သတ်မှတ်ပေးချင်တာက တိမ်းရှောင်ထွက်ပြေးရသူ (DP) တွေအဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်ချင်တယ်။ ဒီလိုသတ်မှတ်ရင် မူရင်း နေရပ်ပြန်ပို့ခြင်း (repatriation) ပြုလုပ်ရမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဂျာမနီ နဲ့ အခြား ဥရောပဒေသတွေကို ပြန်ပို့ရမယ်။ အဲသည် ဂျူးတွေကို တိမ်းရှောင်ထွက်ပြေးရသူ (DP) တွေအဖြစ် အမျိုးအစားမသတ်မှတ်ဘူး ဒုက္ခသည် (Refugee) လို့ပဲ သတ်မှတ်မယ် ဆိုရင်တော့ နေရာပြန်လည် ချထားခြင်း (re-settlement) လုပ်ရမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ပါလက်စတိုင်းကိုပဲပို့ရတော့မယ့် အခြေကို ဆိုက်လာတော့မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒုက္ခသည် (Refugee) အဖြစ်သတ်မှတ်မှာကို အာရပ်နိုင်ငံတွေက အပြင်းအထန်ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြတယ်။ ဒုက္ခသည်ရေးရာမူဝါဒ ချမှတ်လုပ်ဆောင်ရာမှာ မူဆလင်နိုင်ငံတွေ၊ အာရပ်နိုင်ငံတွေဟာ မိမိတို့ အစ္စလမ်မစ်ကမ္ဘာရဲ့ အသာစီးရမှုကို တွက်ချက် လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်တယ် လို့ ဖြစ်ရပ်သက်သေနဲ့ ထောက်ပြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၃။ ၁၉၅၀ လောက်မှာ UNHCR ကို စဖွဲ့တဲ့အခါ ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ ရပိုင်ခွင့်တွေရစေဖို့ ကိုယ်စိတ် ကောင်းမွန်စွာ နေထိုင်နိုင်မှုကို ရရှိရေးကို ဆောင်ရွက်ပေးဖို့လောက်ကို လုပ်ပိုင်ခွင့် ပေးထားရာကနေ နောက်ပိုင်းလုပ်ပိုင်ခွင့်တွေကို တိုးချဲ့ရလာတာ ဘယ်လောက်အထိ ရတာသလဲဆိုတော့၊ စိုးရိမ်ဖွယ်ရာ အခြေအနေထဲ ရောက်ရှိနေသူတွေ (Persons of Concern) မှန်သမျှနဲ့ ပတ်သက်လို့ တာဝန်ယူ လုပ်ဆောင်ခွင့် တွေရ လာတယ်။ စိုးရိမ်ဖွယ်ရာအခြေအနေထဲ ရောက်ရှိနေသူတွေ (Persons of Concern) လို့ ဆိုရာမှာ နိုင်ငံမဲ့ (stateless people) တွေပါ ပါဝင်ထည့်သွင်း လာတယ်။
၄။ UNHCR ဟာ ၁၉၉၄ လောက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ မောင်တောဒေသသို့ နေရပ်ပြန်သူ(returnee)တွေလို့ သူတို့ သတ်မှတ်ထားသူအချို့ကို မူရင်းနေရပ်ပြန်ပို့ခြင်း (repatriation) လုပ်ဆောင်တာ အခြေတကျ ဖြစ်အောင် လုပ်ဆောင်တာတွေ လုပ်နေခဲ့တယ်။ ၁၉၉၅-ခုနှစ်လောက်က စလို့ ထင်ပါတယ်၊ UNHCR ရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ ကို ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်တွေအားဖြင့် တိုးမြှင့်ပေး လိုက်တော့ နိုင်ငံမဲ့ဆိုသူတွေကို ကျွေးမွေးပြုစု အားဆေးထိုးပိုင်ခွင့်တွေ ရလာတယ်။ ယနေ့ ရခိုင်နယ်စပ်မှာ UNHCR က ကျွေးမွေးပြုစု အားဆေးထိုးနေတဲ့ နိုင်ငံမဲ့ဆိုသူတွေရဲ့ အရေအတွက်ဟာ သူတို့ရဲ့ တရားဝင်စာရင်းအရ ရှစ်သိန်းရှိတယ်။ လူမျိုးလိမ်နာမည်တစ်ခုကို ဖန်တီးပြီး နယ်မြေအပိုင်စီးနိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ လူရှစ်သိန်းရှိ လူအုပ်စုတစ်ခုကို နိုင်ငံတကာ အထောက်အပံ့များအားဖြင့် နှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ်လောက် အားကောင်းသထက် အားကောင်းအောင် လူနေမှုဘ၀ပုံစံတွေ ဘက်ပေါင်းစုံက တိုးတက်အောင် နှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ်လောက် UNHCR က အားဆေးထိုး နေခဲ့တယ်။
၅။ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ တရားဝင် လုပ်ပိုင်ခွင့်အပ်နှင်းမှု (mandate) အားဖြင့် နိုင်ငံတကာရံပုံငွေကို သုံးပြီး အဲသည်နိုင်ငံမဲ့ ဆိုသူလူအုပ်စုဟာ အဆက်မပြတ်အထောက်အပံ့တွေ ရနေခဲ့ချိန်မှာ နဂိုကတည်းက အကြိမ်ကြိမ် လူမျိုးတုံးသတ်ဖြတ်မှုကြောင့် လူဦးရေနည်းနေတဲ့ ဘက်ပေါင်းစုံကချိနဲ့နေတဲ့ မြို၊ ဒိုင်းနက်၊ ခမီး၊ ရခိုင် အစရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေ ဟာ ဆင်းရဲသထက်ဆင်းရဲလာတယ်။ လယ်၊ ယာ၊ ချောင်း၊ မြောင်း၊ ကုန်းတွေ၊ တောင်တွေကို တိုင်းရင်းသားတွေ မပိုင်တော့ဘူး။ ကုလားတွေ ရဲ့အပိုင်တွေ ချည်း ဖြစ်လာခဲ့တယ်။ တိုင်းရင်းသားတွေဟာ တစ်နေ့စာတစ်နေ့ရှာစား၊ တောင်တက် ထင်းကောက်၊ ချောင်းဆင်း ခရုကောက် ဖားရှာ စားရတဲ့ သူတွေ အနေအထားမှာပဲ ရှိနေခဲ့တယ်။ စီးပွားရေးလို့ ရှိရင်လည်း ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောက စီးပွားနယ်ပယ်မှန်သမျှဟာ ကုလား လက်အောက်ခံ လုပ်ရတာတွေ ချည်းပဲ ဖြစ်တယ်။ ၆။ UNHCR ကို ယခု အပ်နှင်းထားတဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေအရ နိုင်ငံမဲ့တွေကို ကူညီထောက်ပံ့ဖို့ ဆိုတာအပြင် အဲသည်လူတွေ နိုင်ငံသားဖြစ်နိုင်ဖို့ ကြိုးပမ်းဖို့ကိုပါ လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားတယ် လို့ သိရပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ကုလားလေးတွေကို ဆေးရုံမှာလာမွေးပြီးတော့ မွေးစာရင်းပေး ပေးဖို့ ကူတောင်းနေတဲ့ နိုင်ငံခြားသားလူဖြူတွေကို ဘူးသီးတောင်နဲ့မောင်တော ဆေးရုံတွေမှာ အကြာခဏ ဆိုသလို တွေ့နိုင် တယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ပြည်တွင်းက နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအချို့ဟာ နိုင်ငံခြားသားကျွမ်းကျင်သူ ပညာရှင်တွေ ငှားရမ်းပြီး ၁၉၈၂-ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေကို အသေးစိတ် အနုလုံပဋိလုံ လေ့လာခြင်း ဥပဒေကို ဆီလို အပေါက်ရှာခြင်းတွေ ပြုလုပ်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နယ်ခြားက ဘင်္ဂါလီတွေ နိုင်ငံသား ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အထိ မြန်မာနိုင်ငံသားဥပဒေကို ပြောင်းလဲနိုင်အောင် အဆက်အသွယ်ရှာတာတို့၊ ပြောင်းလဲဖို့ လိုအပ်နေပါပြီလို့ သူတို့ရဲ့ နိုင်ငံရေး အဆက်အသွယ် တွေက တစ်ဆင့် အသံထွက် စေတာ တို့ကို လုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။
၇။ တကယ်တော့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ တည်ဆဲဥပဒေအရ နိုင်ငံသားမဖြစ်နိုင်သူတွေကို နိုင်ငံသား ဖြစ်အောင် ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုက ကြိုးပမ်းနေတာဟာ ဒီနိုင်ငံရဲ့ အချပ်အချာအာဏာကို တစ်စချင်း ချိုးဖဲ့နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၃၀-လောက်က သည်ဟိတ်မြို့မှာ နိုင်ငံအများရေးဆွဲခဲ့ကြတဲ့ နိုင်ငံသားဖြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သဘောတူညီချက် တစ်ခုမှာ ဘယ်လို ပြောထား သလဲဆိုတော့ It is for each State to determine under its own law who are its nationals. လို့ ဆိုထားတယ်။ ဘယ်သူဘယ်ဝါတွေဟာ နိုင်ငံသားဖြစ်တယ် ဆိုတာကို သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံရဲ့ ဥပဒေများအားဖြင့်သာ သတ်မှတ် ဆုံးဖြတ်ရမယ် လို့ ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ ၈။ ယခုနှစ် ၂၀၁၆-ခုနှစ် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်းမှာ သုံးစွဲဖို့ UNHCR ရရှိထားတဲ့ ဘဏ္ဍာငွေပမာဏဟာ (ပြီးခဲ့တဲ့ စက်တင်ဘာလအထိ သိရသမျှ ဆိုရင်) အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း ၃,၄၆၇ သန်း ကျော် ရရှိထားခဲ့တယ်။ ဒီငွေတွေကို ဆက်တိုက်သုံးစွဲခဲ့တယ်။ နောင်လည်း သုံးစွဲဖို့ ၀င်လာဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲသည်ရံပုံငွေထဲက ဘယ်ရွေ့ဘယ်မျှကို ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲက နိုင်ငံမဲ့ဆိုသူ ရှစ်သိန်းနဲ့ ဒုက္ခသည် စခန်းရောက် တစ်သိန်းနှစ်သောင်း (စုစုပေါင်းအားဖြင့် ကိုးသိန်းနှစ်သောင်း) အတွက် ဘယ်လောက် သုံးစွဲနေတယ်ဆိုတာ မသိရဘူး။ အကြမ်းဖျင်းမှန်းဆချက်တွေအရ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း တွေအားလုံး ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ သုံးစွဲနေတဲ့ ငွေကြေးပမာဏဟာ ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရရဲ့ နှစ်စဉ်ဘက်ဂျက်နဲ့ ဆတူ ရှိနိုင်တယ် လို့ပြောကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒါကလည်း ကိန်းဂဏန်းအသေအချာ သိရမှ အတိအကျ ပြောနိုင်မယ့် ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။
၉။ ကမ္ဘာပေါ်မှာလက်ရှိရှိနေတဲ့ နိုင်ငံမဲ့ လူဦးရေ စုစုပေါင်းဟာ ဆယ်သန်းကနေ ဆယ့်ငါးသန်း အကြား ရှိမယ်လို့ အကြမ်းဖျင်းခန့်မှန်းကြပါတယ်။ အဲသည်အရေအတွက်ထဲမှာ ရခိုင်နယ်စပ်က ဘင်္ဂါလီလူမျိုး ရှစ်သိန်း လည်း အပါအ၀င် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလူရှစ်သိန်းကို နိုင်ငံမဲ့တွေဆိုပြီး တစ်ဖက်သတ် အကူအညီ နှစ်ဆယ်ပေါင်းများစွာ ပေးခြင်းအားဖြင့်၊ အဲသည်ဒေသထဲက တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံသားတွေဟာ နဂိုကတည်းက ဆင်းရဲနေပြီးသား ဖြစ်နေရာကနေ ဘင်္ဂါလီတွေကို လူမှုရေး စီးပွားရေးအရ လုံးဝမယှဉ်နိုင်တဲ့ အဆင့်ကို ကျဆင်းလာခဲ့တယ်။ အကူအညီပေးတဲ့နေရာမှာ တိုင်းရင်းသားရွာသိမ်ရွာငယ်လေတွေကို အကြောင်းအမျိုးမျိုးပြပြီး (ဥပမယ အိမ်ခြေ ၅၀ အပြည့်လို့ ဆိုတာမျိုး အကြောင်းပြပြီး) အကူအညီမပေးဘဲ ချန်ထားတဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေအများကြီးရှိခဲ့ဖူးတယ်။ အဲသည်အနေအထားမှာ နိုင်ငံမဲ့ဆိုသူတွေဟာ ဘယ်လောက်အထိအားကောင်းလာသလဲဆိုရင် လက်နက်စွဲကိုင်တိုက်ခိုက်ပြီး လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို သတ်ဖြတ်ပြီး နိုင်ငံရဲ့ အချုပ်အချာအာဏာ ကို တိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့ အဆင့်ကို ရောက်ရှိလာခဲ့ကြတယ်။
၁၀။ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းက နိုင်ငံတကာ အထောက်အပံ့အဖွဲ့အစည်းတွေထဲမှာ UNHCR ဟာ ဘက်ဂျက်အများဆုံး သုံးစွဲသူ ဆရာကြီးဖြစ်တယ်။ များသောအားဖြင့် အခြား UN အဖွဲ့အစည်းတွေ နဲ့ INGO ၊ NGO တွေဟာ အဲသည်ဆရာကြီးနဲ့ လက်တွဲဆောင်ရွက်ရသူတွေသာဖြစ်ကြတယ်။ UNHCR ခိုင်းတာကို တစ်ဆင့်ခံလုပ်ပေးရတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေဟာ ဖြစ်ကြတယ်။
၁၁။ ဆရာကြီးဖြစ်သူ UNHCR ကလာတဲ့ အလုပ်တွေကို UNOCHA က ထိန်းညှိခြင်း steering လုပ်ခြင်းအားဖြင့် ပဲ့ကိုင်တယ်။ ယခုအခါ အန္တရယ်တစ်ခုက ဘာလဲဆိုတော့ ဖြူစင်နှလုံးသား MHDO လိုမျိုး မြန်မာပြည်မက ခရစ်ယန် အဖွဲ့အစည်းတွေကို ဘင်္ဂါလီအားဆေးထိုး လုပ်ငန်းမှာ အကြီးအကျယ် ခေါ်သုံးနေတဲ့ကိစ္စ ဖြစ်ပါတယ်။ UN နဲ့ INGO တွေမှာ ဒေသခံတွေ မပါဘူး၊ ဒေသခံတွေပါရမယ် လို့ဆိုရင် ချင်းလူမျိုးတွေကို ခေါ်ထည့်ထားပြီးတော့ ဒေသခံပါတယ်လို့ သူတို့ ဆိုပြန်တယ်။ ဒီလိုနည်းအားဖြင့် ဒေသခံရခိုင်လူမျိုးတွေရဲ့ ရန်သူစစ်တပ်ကြီးတစ်တပ်ဟာ နယ်မြေကျူးကျော်သိမ်းပိုက်ရေးလှုပ်ရှားမှုကို ကြေးစားစစ်သားတွေသုံးပြီးတော့ မိမိတို့ နယ်မြေထဲမှာ နေ့ညရှိသရွေ့ အချိန်ပြည့်လှုပ်ရှားနေကြတယ်။ ရခိုင်တွေ ဘာမှ မသိရဘူး။ ရခိုင်တွေ ဘာမှ မသိရဘဲ နယ်မြေကျဆုးံနေတယ်။ သိပြန်ရင်လည်း မိမိတို့က ဘာမှလုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိတဲ့ အခြေအနေမှာ တာဝန်ရှိသူတွေက အပြည့်အ၀တာဝန်ယူ အကာအကွယ်မပေးတာကိုပဲ ကြုံတွေ့ကြရတယ်။
၁၂။ ၂၀၁၄-ခုနှစ် မတ်လ (၂၇) ရက်နေ့ စစ်တွေမြို့မှာ စစ်တွေမြို့သူမြို့သားအချို့ဟာ လူအုပ်စုဖွဲ့ပြီး UN အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ INGO တွေ၊ NGO တွေရဲ့ ရုံးခန်းတွေကို ဖျက်ဆီးခဲ့ကြတယ်။ ရခိုင် ပြည်နယ်ထဲကို လာရောက်အခြေစိုက်ရုံးခန်းဖွင့်ပြီး ဘင်္ဂါလီနိုင်ငံထူထောင်နိုင်ရေးကို လာရောက် လုပ်ကိုင်နေသူတွေကို ဘယ်ဒေသခံ ဌာနေတိုင်းရင်းသားကမှ ဒီအတိုင်းလက်ပိုက်ကြည့်နေနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာ/ရခိုင် နယ်မြေတွေကို ကျူးကျော်နယ်ချဲ့ရာမှာ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေက ပါဝင်ကူညီနေတယ်လို့ သိရှိနေရတဲ့အတွက် အလားတူပေါက်ကွဲမှုမျိုးဟာ ဘယ်အခါအဆို ထပ်ဖြစ် လာနိုင်တယ်။ ဦးကျော်ဇောဦး
၂၀၁၆-ခုနှစ် အောက်တိုဘာ (၃၀)
This entry was posted in အထွေထွေ and tagged သတင်း. Bookmark the permalink.	← အနောက်တံခါးကို ကာကွယ်လိုသော ရခိုင်လူငယ်များကို ဒေသန္တရရဲ ဖွဲ့စည်းကာ လက်နက်တပ်ဆင်ပေးမည်